အခွင့်အရေးသစ်ကို ကိုယ်ကျိုးမသုံးရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတိပေး
အောက်တိုဘာ ၂၂ ယခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကို ကိုယ်ကျိုး၊ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအကျိုးအတွက်သာ ကြည့်ပြီး မသုံးစွဲဖို့နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ကျော်အကြာမှာ နေပြည်တော်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗန်းရှင်းစင်တာ-၂ မှာ.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ငါးရက်ကြာခရီးစဉ်အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် လာရောက်မည်ဟု ဂျပန်အစိုးရက ကြေညာခဲ့သည်။
ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးက ရွှေ့ပြောင်းရန် ကြီးမားလွန်းနေ
မကြာသေးမီက ရှာဖွေတွေ့ရှိသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိပြီး ၁၇၄ တန်လေးသည့် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးအား တွေ့ရှိခဲ့သည့် ပိုင်ရှင်ထံတွင် သယ်ယူနိုင်သည့် ကိရိယာများ မရှိသည့်အတွက် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးမှာ အဆိုပါ နေရာတွင်ပင် ဆက်လက်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ ၁၉ ပေရှည်သည့် ကျောက်တုံးကြီးအား ကချင်ပြည်နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း.
အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့က နစ်မြုပ်ခဲ့သည့် အဆိုပါ ချင်းတွင်းမြစ်တွင်းသွား ခရီးသည်တင် အမြန်ရေယာဉ်ပေါ်တွင် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် အလုပ်သမားများ အများအပြား လိုက်ပါလာကြသည်ဟု သိရသည်။
နေရှင်နယ်လိဂ်၊ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲနဲ့ ဘောလုံးလောက အနာဂတ်
စစ်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ တည်ထောင်ထားကြတဲ့ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်တုန်းက ရခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆိတ်သုန်းသွားပြီး အဖက်ဖက်က ဖိအားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရပါတယ်။ ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ ဘရာဇီးကစားသမား မာစီယိုဂိုးမက် ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကို နန်းမင်းအောင်က ရတနာပုံအသင်း.
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ယာဉ်မရပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာများတွင် စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်နားသည့် မော်တော်ယာဉ်များကို ကရိန်းဖြင့်ဆွဲယူခြင်းထက် ပိုကောင်းသည့် ဖြေရှင်းချက်မရှိသေးဟု ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှ မွေးရာပါ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲကလေးငယ် ၁၀၀ ကျော်အား ရိုထရီကလပ် (ရန်ကုန်) (Rotary Club - Yangon)၊ ဝိတိုရိယဆေးရုံနှင့် အမေရိကန်အခြေစိုက် Alliance for Smiles အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့က အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့သည်။
ရခိုင်အကြမ်းဖက်မှုအား လုပ်ဆောင်သည့်အဖွဲ့၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မသိရသေး
သတင်းများ ရရှိထားသော်လည်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များ မသိရသေးသဖြင့် တရားသေ မှတ်ယူ၍ မရနိုင်သေးဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။